Konke malunga nekati yeBangali | Amakati eNoti
UMonica sanchez | | Ukuzalela
Ikati yaseBengal okanye ikati yeBengali ngoboya obumangalisayo. Ukubonakala kwayo kusikhumbuza kakhulu ingwe; Nangona kunjalo, akufuneki sikhohliswe ngenkangeleko yakhe, njengoko enobuntu bekati elithambileyo nelithandekayo lasekhaya.
Luhlobo olutsha, kodwa luya lusanda ngakumbi. Kwaye yile, ngubani ongafuni ukuba nengwe encinci ekhaya? Makhe sifunde okungakumbi ngaye.
1 Imbali yekati yaseBangali
2.1 Ikati emhlophe ye-bengal
3 Ikati yeBengal okanye iBangali ingaphila iminyaka emingaphi?
4 Unjani umlinganiswa?
5 Uyinyamekela njani iBengal okanye ikati yeBengali?
6 Yimalini ikati ye-bengal?
Imbali yekati yaseBangali
Le kati intle yavela njengomnqamlezo phakathi kweekati zasekhaya kunye zasendle, okoko yaqala njengebhastile yekati yeengwe zaseAsia (Prionailurus bengalensiskunye nezinye iintlobo zeekati zasekhaya: I-Ocicat, Abyssinian, IBritish Shorthair kunye ne-Mau yase-Egypt. Yiyo loo nto kunokwenzeka ukuba ube ne-feline ekhangeleka ngathi isendle, kodwa unobuntu obuthandayo kunye nothando.
Ngeminyaka yoo-40 kwakusele kukho iikati zase-Bengal eJapan, kodwa oluhlobo aluzange lukhule de kube yiminyaka engama-20 ukuya kwengama-30 kamva, e-United States, apho baqala ukuboniswa khona ngo-1985. Umbutho weZizwe ngezizwe weKati (ICA).
Ngaphandle koku, kukho imibutho, efana neCFA, engayamkelanga njengohlobo kuba ingamkeli iihbridi. Sisizukulwane sesine kuphela seBangalis esinokuthi sithathe inxaxheba kwimiboniso yabo ngenjongo yokwenza i-genetics yasendle ihlanjululwe ngakumbi. Kodwa inyani kukuba kukho abalimi abaqhubeka nokukhetha iisampulu kwaye bazinqamleze ukuphucula uhlobo; kwaye enyanisweni Namhlanje akusekho mfuneko yokuwela iikati ezinekati kunye neekati zasekhaya.
Ikati ebengal esofeni
Ikati yaseBangali Sisilwanyana esikhulu, esinobunzima obufikelela kwi-9kg kwimeko yenkunzi, ukuya kuthi ga kwi-4kg kwimazi. Umzimba womelele kakhulu kwaye unemisipha, ukhuselwe ziinwele ezimfutshane, ezithambileyo, ezingqindilili. Intloko ibanzi, irhangqiwe, ngamehlo aluhlaza, iindlebe ezincinci kunye nomsila otyebileyo, ophakathi ngokomlinganiselo.
Ngokomgangatho, Kunyanzelekile ukuba ube nencam yomsila omnyama, isisu esineemoto kunye neenyawoIdyasi ibrindle kuphela, kwaye umbala osisiseko unokuba yi-cream, igolide, iorenji, iimpondo zendlovu, tyheli okanye mhlophe.
Ikati emhlophe ye-bengal
Uzikhumbula kakhulu izingwe zealbino, akunjalo? Olo phawu lujongeka njengolusisi, eso simo sengqondo sokuzanelisa esamkelayo ngelixa liqubha ilanga ... Ikati emhlophe ye-bengal sisilwanyana esihle uya kuba ngumhlobo osenyongweni wosapho lonke. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba umhlophe kufuneka uphephe ukuvezwa kukumkani welanga ixesha elide, kuba kungenjalo ekuhambeni kwexesha unokuhlaselwa ngumhlaza wolusu.
Ikati yeBengal okanye iBangali ingaphila iminyaka emingaphi?
Ngaphandle kokuba ufumana unonophelo olufanelekileyo, Ungaphila ngokugqibeleleyo iminyaka eli-9 neli-15. Ewe kunjalo, kufuneka ahlale ngaphakathi endlwini, kuba ukuba siyamkhupha, ixesha lakhe lokuphila liya kuncitshiswa.
Ikati yaseBangali ikati ekhethekileyo. Ukrelekrele kakhulu, unothando, kwaye uyasebenza kakhulu. Uthanda ukudlala, ukuphonononga, ukufunda izinto ezintsha, kunye nokuba nosapho.. Ukongeza, sesinye sezilwanyana esiba nobudlelwane obomeleleyo nomntu omnye, nangona kusenziwa ukuthanda bonke abantu abasendlwini.
Uyakonwabela ukutsiba, ukunyuka kwaye, nangona kubonakala kungaqhelekanga, ukuqubha, into ayaziyo ukuba yenziwa kakuhle kakhulu kuba ngumgangatho awuzuze njengelifa kwikati yase-Asia, ekufuneka izingele ixhoba layo kwimigxobhozo.
Uyinyamekela njani iBengal okanye ikati yeBengali?
Ukuba uthatha isigqibo sokuhlala nekati yase-Bengal kuya kufuneka unikezele ngale nkathalelo ilandelayo:
Nanini na kunokwenzeka, Kucetyiswa kakhulu ukunika ukutya kwendaloNokuba kukutya kweYum kweekati, okanye iBarf (ngoncedo lwesondlo somfazi). Kukutya oya kukunyamezela okona kulungileyo kwaye kuya kukuzisela ezona zibonelelo, ezona ziphambili zezi zilandelayo:
Amazinyo omeleleyo, asempilweni kwaye acocekile
Ukukhula ngokugqibeleleyo kunye nophuhliso
Kwimeko yokungakwazi ukukhetha olu hlobo lokutya, enye indlela ebalaseleyo kukunika ukutya okungenazo iinkozo okanye iimveliso zeemveliso, njengeApplaws, Orijen, Taste of the Wild, phakathi kwezinye kuba ezi azizukubangela ngxaki. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba ibhegi ye-7kg iyabiza: ngokulula inokuxabisa i-euro ezingama-40, kodwa imali ekufuneka inikwe iphantsi kakhulu kunokuba inikwe ukutya okungabizi kakhulu kuba ineproteni yezilwanyana eninzi kakhulu.
Ikati yaseBangali ikati esebenzayo ngakumbi. Ifuna ukudlalwa nayo yonke imihla, amatyeli aliqela. Iiseshoni ezintathu okanye ezine ezithatha imizuzu eyi-10-15 ziya kukugcina umile, kwaye uya kuba noxolo kwaye wonwabe.
Inokuba inomdla kakhulu ukumfundisa ukuhamba naye ukubopha. Ukuba awukwazi ukuba ungayenza njani, ungakhathazeki. Vula Oku kubhaliwe Siyakucacisela.
Iinwele kufuneka ibrashiwe kanye ngemini ngekhadi okanye ikama ukuze kususwe uboya obufileyo. Akukho mfuneko yokuyihlamba. Ngexesha lokunyibilika kuya kucetyiswa ukuba unike Maltha Ukuthintela iinwele ezininzi ekubeni zande kwisisu sakho.
Amehlo anokucocwa rhoqo emva kweentsuku eziyi-3-4 kusetyenziswa i-gauze ecocekileyo (inye iliso ngalinye) ifumile ngokufakwa kwe-chamomile.
Iindlebe kufuneka zicocwe kube kanye ngeveki nge-gauze ecocekileyo kunye nethontsi elimiselweyo lonyango. Kuya kufuneka wongeze 1-2 amathontsi kwaye ucoce indawo engaphandle yendlebe nganye nge-gauze.
Njengayo nayiphi na ikati, kunyaka wokuqala wobomi kuyakufuneka umse kugqirha wezilwanyana ukuze ubeke i izitofu eziyimfuneko kunye neutering okanye ukuchitheka kuye ukuba awuzimisele ngokuzala.
Ukusukela ngonyaka kunye nonyaka, kuyacetyiswa kakhulu ukuba uyibuyise uyokukhuphela kunye nokujonga ukuba kukho naziphi na iingxaki ezinokubakho.
Ukongeza, ngalo lonke ixesha ukrokrela ukuba uyagula, kuya kufuneka ubonane nengcali ukuze ikunyange.
Yimalini ikati ye-bengal?
Ukuba ufuna ngokwenene ukuhlala nekati yaseBengali, kwaye ucinga ukuba ukulungele ukubonelela ngononophelo oluya kuludinga kubomi bayo bonke, kuya kufuneka ucinge ukuba injana iyabiza malunga nee-euro ezingama-1500 ethengwe kwindawo yokutsala.
Siyazi ukuba uyayithanda, ke masiliyeke eli nqaku ngokufaka ifoto kwigalari yeBangali okanye ikati yaseBengal:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Ukuzalela » Ikati yaseBangali, uboya obunenkangeleko yasendle kunye nentliziyo enkulu